Vanyori - Zvinyorwa Nhau | Zvinyorwa Nhau (Peji 4)
Mika Waltari akafira muHelsinki musi waAugust 26, 1979. Anozivikanwa nenyaya yake yenhoroondo, zita rake rine mukurumbira ndiSinuhé, muIjipita.
Kubva kuJapan kuenda kuColombia, rwendo urwu kutenderera pasirese mune gumi vanyori vanofumura vamwe vevanyori vane mukurumbira munhoroondo.
Nhasi ndinoongorora imwe yenyaya dzinovaraidza dzevatema dzandakaverenga, iya yaMyron Bolitar neshamwari yake inokwezva Win Lockwood, naHarlan Coben.
Vanyori ava avo vakazivikanwa mushure mekufa kwavo vanosimbisa mamiriro ezvinhu anokatyamadza evanyori vasina kumboona kubudirira kwemabasa avo.
Herbert George Wells akashaya musi waNyamavhuvhu 13, 1946. Ndinoyeuka uyu munyori akakurumbira wechiRungu wemabhuku enganonyorwa yesainzi, mutangidziri wemhando iyi.
Ava vanyori venhau vanonyanya kukosha munhoroondo vakashandura zvinyorwa zvipfupi kuva bhenji revadzidzi vatsva nevanyori.
Vanyori Vakanaka veAmerica
Ernest Hemingway kana Emily Dickinson ndivo vamwe vevanotevera vanyori vekuAmerican vane mabasa vatove chikamu chenhoroondo.
Munyori weAmerica Herman Melville ane zuva rake rekuzvarwa nhasi. Munyori wemweya usingafi Moby Dick, mundangariro yake mune mitsara makumi maviri kubva kumabasa ake ane mukurumbira.
Yegumi nemakumi matatu yekuzvarwa kwekuzvarwa kukuru kwemabhuku epasirese, munyori Ernest Hemingway. Izvi zvimwe zvidimbu zvemabasa ake.
Nhasi ndinounza mumwe munyori wekuzvimiririra uyo anofanirwa kuteedzera pasi. Jorge Moreno, anobva kuMadrid, anopindura mibvunzo gumi, kunyanya zvishoma.
Mudzidzisi akaita kuti hupenyu hunetseke kuna Joanne Rowling, Mai Morgan, ndiye mumwe wevanhu vakaipa kwazvo muHarry Potter: Muzvinafundo Severus Snape.
Musi waJune 22, 1865, Mutongi weRivas akashaya. Basa rake rinomiririra zvakanyanya ndiDon Álvaro kana simba remhedzisiro, yandinosarudza zvidimbu zvishoma.
Vanyori ava vasina kuhwina mubairo weNobel weMabhuku vanosimbisa kuti dzimwe nguva Sweden Academy inogona zvakare kunge iri isiriyo.
Iko kugona kusanganisa mashiripiti uye hupenyu hwezuva nezuva unoita aya akanakisa mashiripiti echokwadi mabhuku vamiririri vakanakisa veiyi genre yakabuda muLatin America.
Aya mabhuku akanakisa naChimamanda Ngozi Adichie anofukidza misoro yakakosha zvakanyanya senge hukadzi, kutamira kune dzimwe nyika kana kuzivikanwa kweAfrica.
Nhasi ndinotaura nemunyori weExtremaduran Luis Roso, uyo apindura mimwe mibvunzo. Taura nezvemabhuku avo, vanyori vavo, uye zvinyorwa zvavo zvekunyora.
Tichitora mukana wekuuya kwekupedzisira kwezhizha, aya mabhuku akanakisa akagadzwa negungwa rwendo rwunozorodza kuburikidza nemamwe emabasa makuru ezvinyorwa.
Pakati pemabhuku akanakisa aSalman Rushdie tinowana kwete chete enedzakanakisa nyaya dzeIndia, asi ongororo yakakwana yenyika ine mhirizhonga sezvo ichinakidza.
Dashiell Hammett anotendeuka makore gumi nemaviri nemana. Achifungidzirwa sababa venhoroondo yekuparwa kwemhosva, ndinorangarira mamwe emabasa ake akakurumbira nemitsara.
Chinyorwa chekutanga chakatsaurirwa kune vanyori vanozvimiririra. Francisco Hergueta, munyori weLa Solana, anotanga, anopindura mibvunzo gumi nezve chiitiko chake.
María Frisa ari kuve iye ari kutsikisa chiitiko chenguva neinovhero yake Ndichengete ini. Anopindura iyi mibvunzo gumi nezve rake basa.
Nhasi Camilo José Cela angadai asvitsa makore 102. Ndinomuyeuka musarudzo yemitsara nezvikamu kubva kuLa familia de Pascual Duarte.
Aya mabhuku asiri echokwadi ekunyepedzera anotangira kuZarathustra's manifesto kuenda kuVirginia Woolf chiratidzo chevakadzi kuburikidza nedzimwe nzira dzekunzwisisa imwe nguva munhoroondo.
Mabhuku akanakisa aHaruki Murakami
Kutenderera kwechokwadi uye fungidziro, pakati peEast neWest, aya mabhuku akanakisa akanyorwa naHaruki Murakami anomiririra hunhu hwemunyori anozivikanwa kwazvo wechiJapan pasi rose.
Aya akanakisa maakaunzi evanyori pa Instagram anotibvumidza kuti titarise muchadenga dzetsamba uye anecdotes evamwe vevanyori vazvino vanyori.
Dzakaomarara Imbwa Usatamba ndiyo yazvino nyowani naArturo Pérez-Reverte. Iyo imbwa nyaya inotarisana naEl Negro, aimbova murwi wehondo.
Aya mabhuku emadzimai akanakisa munhoroondo anotitungamira kuti tiongorore uye nekuona ese manzwisisiro eanoshanduka kupinkiya kuburikidza nezvinyorwa zvakasiyana uye enganonyorwa.
Vanamwari veNorse uye mabhuku engano
Aya mabhuku akanakisa enhema dzevamwari veNorse uye vanamwari vanotinyudza mune zvese zvakasikwa uye ngano dzevarwi vakapakata mheni, vasikana vakagwamba nechando nenyundo dzisingafi.
Tichienderana nekuburitswa muSpain kweiyo Witch, isu tinofamba tichitenderera nenyaya dzeSweden zvinyorwa zvisina mweya nemabhuku akanakisa aCamilla Läckberg.
WeNorway tsotsi inoverengeka tenzi ane 58 Kurume nhasi. Musi wa29 yakaona mwenje wayo wekutanga, zvirokwazvo kwakasviba, muOslo. Kupemberera, ini ndinosarudza muunganidzwa wemitsara kubva kumanovhita echisikwa chayo chakakurumbira, curator Harry Hole
Chishanu chekurwadziwa. Hapana chinhu chiri nani kupfuura Lola ane mukurumbira mumabhuku ekuperekedza pazuva rino uye onomastics ezvese zvavari. Mitsara kubva kuVladimir Nabokov classic.
Pave nemakore masere kubva pakufa kwaMiguel Delibes, mumwe wevanyori vane mbiri kwazvo mumabhuku edu. Ini ndinonunura mundangariro dzako mashoma emitsara nezvidimbu zveimwe yebasa rake rakakosha.
Makore 34 Pasina Cortázar: Zvinyorwa Zvake Zvakanakisa
Nhasi tinouya kuzoongorora rakakosha zuva rakaitika nezuro, Kukadzi 12: 34 makore asina Cortázar: Zvinyorwa zvake zvakanaka.
Muchinyorwa chedu nhasi tinokuunzira vashanu vanyori vakaita nhoroondo: Gloria Fuertes, Virginia Woolf, Rosalía de Castro, Jane Austen naMaría de Zayas.
Tsamba 117 kubva kuLope de Vega yakawanikwa neNational Library
Iwe unoziva here kuti National Raibhurari yatenga mazana mana ezviuru euros tsamba dzinosvika zana nemakumi manomwe nenomwe kubva kuna Lope de Vega yakanyorerwa Duke we Sessa?
Aya matsva maviri anotengeswa pakati paKukadzi. Imwe yekutanga yeBritish Daniel Cole uye imwe needu wakatsaurwa Juan José Millás. Iwo maviri mafambiro mberi andatove ndakakwanisa kuverenga uye kukurudzira.
Kubva mutaundi reMacondo kuenda kunhetembo dzechidiki weChilean, aya mabhuku akanakisa ezvinyorwa zveLatin America anosanganisira akanakisa emabhuku kubva kune rimwe divi reAtlantic.
Nemakore makumi maviri nemashanu chete, mudetembi wekuCanada wekuIndian mavambo Rupi Kaur ave mambokadzi weanonzi "instapoets" nekuda kwemamwe mavhesi anotsvaga mumatambudziko makuru enguva yedu.
Colonisation, barika kana hondo ndiwo mamwe madingindira anotsanangura kondinendi hombe pasi rese uye kusarudzwa kwedu kwemabhuku akanakisa ezvinyorwa zvemuAfrica.
Murakami, Vargas Llosa kana Bolaño ndiwo mamwe emazita ari mune anotevera runyorwa rwemabhuku achaburitswa muna 2018 uye atisingakwanise kumirira kuverenga.
Muchinyorwa chedu nhasi taida kupa rukudzo kuna George Orwell, munyori akashinga kutaura nezve huwori hwepasirese hwenguva iyoyo.
Kutsoropodza, vakadzi, mashiripiti echokwadi ... Iwo akanakisa mabhuku aIsabel Allende anotibvumidza isu kuti tipinde muchadenga chemunyori anoverengwa zvakanyanya anorarama wechiSpanish munyori munyika.
María Goodin akatipa nhema dzako dzinotapira muna 2013. Mune ino, kusvika parizvino inoverengeka, akadurura moyo wake uye neruzivo rwake semuzvipiri kuchipatara chekurwara nepfungwa.
Iye munyori weChirungu Simon Beckett akanyora iyi nhema tetralogy pane zviitiko zve forensic anthropologist David Hunter mumakore gumi ekutanga ezana rino ramakore. Isu tinotarisa.
Mitsara miviri yekunyora yaJose María Guelbenzu: Iyo yakadzika uye inotsoropodza magariro enhau uye inoverengeka yekufungidzira mune akateedzana achitarisa Mutongi Mariana de Marco. Ivo vakasiyana zvakanyanya here?
Sue Grafton's Nherera Z
Arufabheti yeUtsotsi yakasara isina Z mushure mekufa kwemunyori wayo, Sue Grafton, muvambi wenyaya yematsotsi akateedzana naKinsey Milhone.
2017. Yangu nhema nhema yeYankees, Vikings, Italians, Gauls uye nyika
2017 iri kupera uye ini ndinotora mamwe emanoir novel ayo andikunda ini gore rino. Pamusoro pechinyorwa pane maViking, maItaly nemaGauls, pamwe nemaYankees nemaSpanish.
Aya mabhuku gumi akanakisa naGabriel García Márquez anomutsa zvese zvakasarudzika zvemashiripiti, zvisingagumi uye zvizere nenyaya huru.
Iko hakuna Kisimusi isina Charles Dickens. Iko kune firimu idzva nezve chimiro chemunyori mukuru wechiChirungu uye marongero aakaita nyaya yake yeKisimusi.
Muchinyorwa chino ndinoenda kubva kumunyori kuenda kumunyori kunokurudzira vandinoshanda navo uye nekuita mamwe mazano akakosha kuitira kuti zvinyorwa zvavo zvione chiedza.
Munyaya yanhasi yezvinyorwa tinoongorora Benito Pérez Galdós, mumiriri wepamusoro weSpanish Realism. Mangwana tichataura nezvaLeopoldo Maiwe "Clarín".
Robert L. Stevenson ndomumwe wevanyori vakakurumbira vemabhuku enguva dzese. Makore gumi nemaviri apfuura kubva paakafa. Tinoongorora basa rake.
Isu tinoongorora vamwe vevanyori vakazvarwa muna Zvita uye tinosarudza mamwe mitsara kubva kumabasa avo uye nehupenyu hwavo kuti uperekedze mwedzi wekupedzisira wegore.
Iyo yazvino firimu kuchinjiswa kweMurder pane iyo Orient Express, imwe yenyaya dzinozivikanwa dzaAgatha Christie, yaburitswa. Tinoongorora zvimwe.
Pazuva rino munyori we "Little Women" akazvarwa: Louisa May Alcott. Nhasi tinoongorora muchidimbu mabasa ake uye bhuku rake "Vakadzi vadiki".
Kune mamwe mashanu erima toni kuverenga kuti utore mukana weChishanu Chishanu. Makomputa maviri naLemaitre naSilva uye matatu matsva aburitswa naConnelly, Manook naMytting.
YeChishanu Chishanu ichi (icho chakatumirwa kunze kweChishanu Chishanu) tinoona sarudzo yemablack gumbo matsotsi enhau nerutsva achangoburitswa mwedzi uno.
Isu tinoongorora hupenyu nebasa raCharles Perrault, munyori wedzimwe dzenyaya dzevana dzinozivikanwa kwazvo munhoroondo yezvinyorwa.
Muchinyorwa chanhasi tinokudza Noah Gordon: Pazuva rino munyori Noah Gordon akazvarwa, asi muna 1926.
Jo Nesbo, munyori weNorway akasimba wematsotsi uye enganonyorwa dzevana, akapa mune ino bvunzurudzo matipi gumi evanyori vekutanga.
Ongororo pfupi yeiyo boigraphy yaOctavio Paz, mudetembi weMexico uyo akapihwa Nobel Prize yeMabhuku.
JFK yakadzikira. Mamwe mabhuku ane chimiro chake kumashure
Zvinyorwa nezvekufa kwaJohn Fitzgerald Kennedy, JFK, zvakaziviswa. Isu tinoona mamwe mabhuku aine yake iconic chimiro seye protagonist kana kumashure.
Mwedzi waNovember nyeredzi mune mamwe mabhuku mazita mumakore akasiyana siyana uye pane akasiyana madingindira. Tinoongorora zvishoma.
Hapana manhanga, hapana madandemutande, hapana zviremwaremwa, hapana mhemberero dzinounzwa kunze kwenyika. Iye zvino hapana mumwe kana hunhu huri nani kupfuura Don Juan Tenorio.
Leo Demidov naAlexei Korolev vatsvakurudzi veRussia vakagadzirwa nevanyori veBritish Tom Rob Smith naWilliam Ryan. Tinoona kuti ndivanaani.
Jim Thompson naJoseph Wambaugh mazita maviri echinyakare munhoroondo nhema yeAmerica. Isu tinoongorora maviri eake ounyanzvi.
Isu tinoramba tichitsvaga muNew 2017 Planeta Prize uye mune ino chinyorwa tinopa ake matatu akanakisa mabhuku. Wakamboverenga here imwe yadzo?
Tiri kuswedera kumhemberero yezana ramakore reRusununguko rweRussia uye ndakanunura vatatu vanyori vekare vezvinyorwa zvavo mumabasa avo matatu.
Nemanzwi eNobel Prize muLiterature yeBritish Kazuo Ishiguro uye hukama neiyo cinema, tinoongorora vamwe vanyori vanokunda mutsinga imwecheteyo.
Muchinyorwa chanhasi tinotaura zvakare nezve 2017 Mubayiro weNobel muMabhuku: Iwo akanakisa mitsara yaKazuo Ishiguro. Zvimwe zvinotorwa mumabhuku ake ...
Ivo vedu vanonyora nguva zhinji vanofanirwa kufunga nezve mamwe matipi kuti vasvike zvirinani kune vaverengi vedu. Aya gumi anogona kutibatsira.
Gumiguru. Vanyori vakazvarwa mumwedzi uno. Mamwe emitsara yake
Mumwedzi uno waGumiguru vanyori vakuru vanopemberera makore. Isu tinovarangarira nekusimbisa imwe yemitsara yavo mumabasa avo kana muhupenyu hwavo.
Iyo Taschen Publishing Imba yakaburitsa yakanakisa mitsva mitsva yedzimwe ngano dzekare neHama Grimm naHans Christian Andersen.
Muchinyorwa chedu chinyorwa nhasi tinorangarira Emilia Pardo Bazán, munyori anonyanya kukosha weSpanish Naturalism. Mitsara uye zvishoma zvebasa rake.
Iko kushandiswa kwe ellipsis kana hunyanzvi hwekunyengera kupinda mune anotevera matipi mashanu ekunyora micro-nyaya.
Pave nemakore makumi manomwe nemashanu kubvira pakaburitswa Bhuku rekutanga reVashanu, akateedzana enoverengeka evana nevechidiki nemunyori weBritish Enid Blyton.
Chikamu chechipiri chekuverenga kwangu muna Chikunguru na Nyamavhuvhu. Ino nguva ini ndinoongorora matatu emhando dzerudo mazita andakaverenga mumwedzi iyi.
Pakati pevamwe, aya anga ari matanhatu ekuverenga kwangu kubva munaChikunguru naNyamavhuvhu. Kubhadhara pakati pevatema vatema neepinki yepinki kuti umire kupisa.
Isu tinoongorora nano nhanhatu izvozvi pakati pezvakanakisa-kutengeswa uye nemazita evanhukadzi ari kubudirira. Zvekudzoka kubva kuzororo.
Nhasi Nyamavhuvhu 25, asi muna 1984, Truman Capote, munyori mukuru weAmerica uye mutori wenhau, akashaya. Ndeapi mabasa ake wawakaverenga?
Nhasi Paul Coelho anopemberera zuva rake rekuzvarwa makumi manomwe uye muActualidad Literatura taida kurangarira mamwe emitsara yake yakanaka. Bhavhadhe rinofadza!
Mabhuku manomwe pamashefu ezvitoro emashizha ezhizha
Ndichakamirira nhau dzematsutso, ndinofamba-famba kuburikidza nemabhuku mashoma anoonekwa pamashefu ezhizha ezvitoro zvemabhuku.
Mamwe mabhuku matanhatu nevanyori kubva kuReal Sitio uye Villa de Aranjuez. 6nd kuendesa
Chikamu chechipiri chemabhuku nevanyori vanobva kana kubva kuAranjuez, iro guta rakanaka kumaodzanyemba kweCommunity yeMadrid. Novels, nhetembo uye nyaya.
Kushaikwa kwenguva kana kuvimba nepfungwa dzakanaka zvimwe zvezvikonzero zvinomwe zvinomwe nei usinganyore iyo nyaya kana novel.
Muchinyorwa chemanheru tinokuunzira mabasa ekufananidzira aAlexander Dumas. Nderipi kana nderipi remabasa mashanu awa raunonyanya kufarira?
Mumwedzi mumwe waChikunguru, maAlexandros ane mukurumbira muFrance, maDuma, vakazvarwawo, makore makumi maviri nemaviri vakaparadzana. Tinoverenga mimwe yemitongo yake.
Nhasi uno zvinoratidza bicentennial yekufa kwemunyori weBritish, Jane Austen. Tinoongorora ake akakosha uye akakosha mabasa.
Tinoongorora mazita nemabhuku avo evamwe vanyori vemazuva ano veAranjuez vari kubudirira zvakanyanya. Kuti uwane mamwe matarenda.
Nhasi mucherechedzo wemakore mazana maviri ekuberekwa kwaThoreau uye muna A. Literatura tanga tichida kumukudza seizvi: akapfupikisa hupenyu nebasa uye "Kusateerera kwevanhu kwavo".
Muchinyorwa chanhasi tinobhadhara mutero mudiki kuna Marcel Proust, akaita ichi chiratidzo chekuverenga sechinhu chekutandarira.
Iyo XXX edition yeiyo Nhema Svondo yeGijon inotanga, inonyanya kukosha chiitiko chezhizha. Tinoongorora zvavanoita.
Isu tinoongorora aya matatu mazita matsva kubva kuvanyori vanopisa: Karl Ove Knausgård, Tana French naLuca D'Andrea. Kuverenga kunonakidza kwemazororo.
Mumwedzi uno waChikunguru, vamwe vanyori vakazvarwa, vandakanunura kubva kwavari zvirevo zvavaidudza kana kunyora mumabasa avo. Kuti uverenge mabrushrush ehunyanzvi hwake.
Kubva kune vanyori vakakura vakazvarwa muna Chikumi, isu takasarudza mamwe mazwi anomiririra kubva kumabasa avo.
Imwe yeaya madhiri-ndangariro atinoda zvakanyanya: Nhasi, Leopoldo María Panero angave ane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe ekuberekwa. Pano 69 nhetembo dzake uye mishanu mitsara.
Aya matipi mashanu ekuwana nguva yekunyora anogona kuve yako mhinduro kana uchibata nemabasa ako uye neshungu dzako huru.
Pazuva rino, Johanna Spyri, musiki waHeidi, akazvarwa, iyo nyaya yevana iyo ingangoita isu tese yatakaona pane diki sikirini muchimiro chemakatuni.
Kune zvakawanda, asi nhasi tiri kutaura pamusoro pemapurisa mana, vanoshanda kana vari pamudyandigere, vari zvakare vanyori vana vane mukurumbira pasi rese uye mabasa anoshamisa.
Isu tinoona 7 matsva enhau dzematsotsi kumirira zhizha. Mazita akaita seWinslow, Hawkins, Rankin kana Meyer anotora mazita matsva.
Makore makumi maviri apfuura kubva pakashandurwa firimu raJames Ellroy ane mukurumbira wekare, LA Confidencial. Isu tinoongorora iri rakakosha basa reMad Dog.
Ichi chikamu chechina chechiso chemapurisa nematikitivha chakakosha. Nhasi tine kumeso kumwechete kune vaviri vacho, avo vaGunnar Staalesen naDeon Meyer.
Nhasi tinokuunzira mitsara makumi maviri neshanu yekurangarira Arthur Conan Doyle, musiki weimwe yevanonyanya kudiwa vatambi venhema: Sherlock Holmes.
Nhasi tinokuunzira pfupiso pfupi kubva kumuzivi uye munyori Ayn Rand. Aive makore anoda kusvika makumi manomwe apfuura, iwe unofungei nezvekufanotaura kwakadai?
Muchinyorwa chanhasi tinorangarira munyori mukuru akatotisiya: Gabriel García Márquez nemitsetse yake gumi nematatu kuti vararame. Waizviziva here?
Nhasi tinoongorora makumi maviri nemaviri emitsara yematsotsi, kubva kumudzidzisi weBritish Agatha Christie kuenda kuAmerican Don Winslow. Asi ivo vasingaverengeki.
Kuongorora kwe _Bull Mountain_, bhuku rekutanga naAmerican Brian Panowich, chirevo chitsva kune inonzi "nyika noir".
Ruzivo. Tinoongorora mazita achangoburwa kubva kuvanyori vekuNorth America Kristin Hannah naGlenn Cooper, vane mabhuku matsva pamusika.
Chinyorwa chanhasi chiri nezvemunyori wekare uyo akatisiya makore gumi nemanomwe apfuura: Antonio Buero Vallejo, mutambi wemitambo wechiSpanish, akashaya nhasi
Nenhandare iri muropa. Shamwari yangu munyori, mutambi uye director Mari Carmen Rodríguez.
Nhasi ndiri kutaura nezveshamwari yangu Mari Carmen, mutambi wemitambo, mutambi uye director. Rega chimiro chako chive muenzaniso wevanyori vazhinji vasingazivikanwe vari munzvimbo zhinji.
Iko kuunganidzwa kwemimhanzi kunokurudzira munyori H. Murakami kunozivikanwa
Iko kuunganidzwa kwemimhanzi kunokurudzira munyori H. Murakami kunozivikanwa. Yakagadzirwa naMasamaro Fujiki uye tinogona kuiwana paSpotify.
Muchinyorwa chino isu hatisi kungokupa iwe rumwe ruzivo iwe rwaunogona kunge usingazive nezvaJK Rowling, munyori weHarry Potter, asi isu zvakare tichakufadza iwe wezuva iri.
Takataura nezvezvinhu zvakawanda naJo Nesbø muBarcelona. Harry Hole, Macbeth, Kosmopolis na _La sed_, bhuku rake razvino, zvakare rakajeka.
Pazuva iri, makore makumi manomwe nemashanu apfuura, Miguel Hernández akafira mutirongo muna 75. Basa rake rekupedzisira raive "Rwiyo rwebhuku uye mabhaladhi ekushaikwa."
Muchinyorwa chino tinokupa iwe runyorwa rwemabhuku akakurudzirwa naJoseph Brodsky, Mubayiro weNobel muMabhuku muna 1987. Kuzvidzidzisa-kudzidzisa kubvira aine makore gumi nemashanu
Betty, runyorwa razvino rweIcelandic Arnaldur Indridason inobatana neyekare tsika yemair genre nezvemukadzi anouraya. Isu tinoenda pamusoro pemamwe mazita.
_The Wood Book_ ndiyo ichangoburwa uye inonyanya kushamisa kutengesa zvakanyanya pamachati. Norwegian Lars Mytting anotyora muforoma nechinyorwa ichi pahuni.
Isu tinounganidza mamwe mavara ezvinyorwa kubva kune vanyori vakuru, asi ino nguva nezve ruvengo. Kune avo vane mweya mudiki waValentine.
15 mazwi akatorwa naCharles Dickens
Muchinyorwa chanhasi tinounganidza mitsara gumi neshanu naCharles Dickens, munyori ane mukurumbira webasa rine mukurumbira "A Christmas Carol."
Chinyorwa chanhasi chinotaura nezvevanyori vakakanganwa kwenguva refu, kusanganisira weNobel Prize Winner weMabhuku: Viki Baum, Erskine Caldwell, naPearl S. Buck.
Nhasi izuva rekuzvarwa raPaul Auster, munyori weAmerica uye mugadziri wefirimu. Ane makore makumi manomwe ari pasi pebhandi rake, iye ndomumwe wevanyori vakanyanya kupara mhosva.
Iye munyori we "Iyo Etruscan Smile", José Luis Sampedro, akazvarwa pazuva rino uye tinoda kumuyeuchidza neichi chakakosha chinyorwa chakapihwa kubasa rake uye munhu.
Tinorangarira munyori wechiFrench Jean-Claude Izzo mune rake rakakurumbira dema genre trilogy uye neake anoyevedza hunhu, Fabio Montale.
Munyori weScotland Craig Russell, musiki waKomishina Jan Fabel naDetective Lennox, vanotaura nezve kuverenga kwavo kwazvino uye chiitiko chekunyora.
Zviri kuverenga ava vatatu vedu vanyori
Nekuti vanyori vedu vanonyanya kuverenga. Kutenda Javier Sierra, Domingo Villar naFrancisco Narla nekugovana kuverenga kwavo nesu.
Nhasi tinorangarira Rubén Darío, panopembererwa makore makumi mashanu ekuberekwa kwake. Isu tinozviita nekurangarira izvo zvakamuita mukuru: nziyo dzake.
Jo Nesbø anonyorerawo vana. Izvo zviitiko zveChiremba wake Proctor zvakabudirira sekutamba kwake kwevakuru. Vazivise ivo, ivo vanokushamisa iwe.
Pazuva rino akaberekwa Isaka Asimov
Chinyorwa chanhasi chinotitora kuti tiongorore zvakapfupika hupenyu nebasa reiye mukuru Isaac Asimov kubvira paakazvarwa nhasi muPetrovichi, Russia.
Actualidad Literatura ane mufaro wekubvunzurudza munyori anonyanya kutengesa Enrique Laso. Munyori wenhau anotiudza zvese nezverwendo rwake rwekunyora.
Dickens 'classic of classic haambokundikani pamazuva aya. Asi munyori mukuru wechiRungu akanyora dzimwe nyaya dzeKisimusi. Heano mamwe acho.
Muchikamu chino taida kurangarira munyori weUruguay Horacio Quiroga, uyo akanyora chirevo ichi chemutauri akakwana. Maimuziva here?
Wanga uchiziva zvese izvi chokwadi nezvevanyori vane mukurumbira?
Muchikamu chino tichaenda kukupa zvinoda kuziva nezvevamwe vanyori. Ino nguva ivo vari Jules Verne kana Shakespeare, pakati pevamwe.
Pazvinyorwa zvese zvandiri kuronga kunyora pamusoro pemwedzi unotevera nezve chimiro chaMiguel de Cervantes, ichi ndicho chekutanga.
Isu tinoita yakakosha iyo yatinobhadhara mutero kune mumwe wevanonyanya kukosha vadetembi munyika: Rosalía de Castro, muGalician akamutsidzira rurimi rwaamai.
Pamakore zana ekufa kwemunyori ane mukurumbira wekuAmerica tinoongorora mamwe emazita ake anozivikanwa pasi rose.
Muimbi, mudetembi, munyori, maererano nevanakomana vake baba vakanaka, uye kwatiri, pakutanga kuona, airatidzika semunhu anodiwa: Mutero kuna Leonard Cohen.
José Giovanni aive munyori akapa hupenyu hwevaya vanoratidza kuti kazhinji nguva yegore rakapfuura inogona kutungamira kune rinoremekedzwa basa rekunyora.
Muchinyorwa chanhasi tinounza pamwechete mavara maviri ekunyora: Luis Cernuda naSam Shepard. Mumwe mudetembi uye mumwe wevanyori vanonyanya kukosha muUnited States.
Santiago Posteguillo, iye «mambo» wenhoroondo yenhoroondo
Santiago Posteguillo nemaviri trilogies ake paTrajan neScipio ndeimwe yenyika mareferenzi enhoroondo yenhau yakatsaurirwa kuRoma nenhoroondo yayo.
Ingori quirk yemagumo chengetedza hupenyu hwaJRR Tolkien muHondo Yenyika I. Iyi hondo, iyo yakapotsa yatora hupenyu hwake asi yakafemera basa rake.
Isu tinoenda pamusoro pemamwe mazita epasirese evanyori vevakadzi ayo asingakanganike kana anofanira kuverengwa. Kubva kuna Jane Austen kuenda kuMo Hayder.
Nhasi uno mucherechedzo wechigumi nematatu wegumi wekuzvarwa kwaFrançois Mauriac. Semutero, tinoongorora hupenyu hwake uye kubatikana kwake munhoroondo yezana ramakore rechi131.
Benito Pérez Galdós nebasa rake zvanyangarika kubva pachikoro chechikoro. Ruzivo rwakakomberedza uyu munyori mukuru ari kunyimwa kune vedu vadiki.
Munyori anozivikanwa weBritish anozivikanwa kuve baba vengano Sherlock. Zvisinei, hupenyu hwaConan Doyle ndewechokwadi uye hunonakidza.
Vanoti kana chirongwa chitsva chikatangwa, rubatsiro nerutsigiro rwunopihwa zvishoma ... Saka, iwe unofungei ...
Ungatanga sei mubasa raSir Terry Pratchett
Gwara diki pabasa rekunyora raSir Terry Pratchett, gwara rinodiwa kana munhu asingade kurasikirwa pakati pemabasa nemabhuku eDiscworld ...
Waiziva here hupenyu hunosiririsa hwevanyori vashanu vane kusagadzikana kwepfungwa? Vese vakatambura nguva yekushushikana uye zvimwe zvirwere.
Munyori weMadrid Javier Marías anotendeuka makumi matanhatu nemashanu nhasi. Munyori wemanovels uye zvinyorwa, iye akanyorawo zvinyorwa, shanduro uye zvinyorwa zvevana.
Hunhu hutsva hunobatana nenyika yaWinnie the Pooh. Mune ino kesi, bere richaperekedzwa neshamwari nyowani: iyo penguin.
Tsvaga iyo yemapepanhau iyo ichazoburitswa mukati rese rechipiri vhiki raGunyana, kubva 12 kusvika 16.
Unoziva here kuti ndeupi munyori akazvarwa musi mumwe chete newe?
Kana iwe wakambozvibvunza kuti ndeapi "vane mukurumbira" vakazvarwa pazuva rimwe chete newe, iwe unogona zvakare kufarira kuziva nezvevanyori ava.
Edhisheni nhau svondo rino (Gunyana 5 - 9)
Tsvaga yemapepanhau ayo anosvika muzvitoro zvemabhuku muSpain pakati peMuvhuro, Gunyana 5 neChishanu, Gunyana 9.
Muna 1970, asi pazuva rakafanana nanhasi, François Mauriac, akahwina Mubayiro weNobel, akafa muna 1952. Munyori wechiFrench uyu akazvarwa…
Tsvaga zvinyorwa zvekunyora zvinosvika kuzvitoro zvemabhuku pakupera kwaNyamavhuvhu uye kutanga kwaGunyana wegore rino 2016.
Tsvaga kuti ndeapi mazita ekutanga aive, iwo mazita aive nemabhuku aizove nawo pakutanga, emabasa anozivikanwa kwazvo.
Tinokupai makotesheni makumi maviri neshanu kubva kuvanyori vevakadzi Ndeupi waunofarira?
Pazuva rino senge nhasi, Chikunguru 21, kunyanya mugore ra1899, Ernest Hemingway, munyori anozivikanwa weAmerica uye mubairo wePewize, akazvarwa ...
Kunyangwe parizvino, Mario Vargas Llosa, ari munzvimbo inoonekera uye munhau dzenyaya dze "pink Press" kupfuura ...
Muna 1969, John Martin, mupepeti weBlack Sparrow, akapa zvinotevera kuna Charles Bukowski netsamba. The…